Fa inona ny gorobona vita amin'ny bosoa ary misy karazany maro? - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Fa inona ny gorobona vita amin'ny bosoa ary misy karazany maro?
Cork no arovana miaro ny oak sinoa, izany hoe hoditra, izay matetika fantatra amin'ny hazo oaka. Ny hatevin'ny bosoa dia amin'ny ankapobeny dia 4 mm mm, ary ny kisoa avo lenta dia mety hahatratra 8.9 mm. Raha ampitahaina amin'ny gorodona hazo matevina, ny gorodona vita amin'ny bosoa dia tena mahomby amin'ny fampisehoana ny tontolo iainana sy ny fanoherana ny hamandoana.
Misy karazany telo karazana gorodona:
Floor gorodona manga. Ny savaivony dia 4 na 5 mm.Marina be sy saro-takarina amin'ny resaka loko izy, ary tsy misy lamina voafaritra. Ny mampiavaka azy lehibe indrindra dia vita amin'ny hazo malefaka malefaka, ary apetraka ilay fametrahana azy, izany hoe mifamatotra mivantana amin'ny tany miaraka amin'ny lakaoly manokana.Maha sarotra kokoa ny fizotry ny fananganana ary ny haavon'ny tany ihany koa dia avo kokoa.
Floor gorodona mangingina. Izy io dia fampifangaroana vita amin'ny bozaka sy laminate.Nampiditra sisan-kisoa iray manodidina ny 2 mm eo ambanin'ny hazo maitso laminate mahazatra, ary ny halaliny dia mahatratra 13,4 mm. Rehefa mandeha ambony ny olona iray, ny tafo ao ambany dia afaka mandona ny ampahany amin'ny feo ary mitana anjara toerana fampihenana feo.
Floor gorodona. Hita avy amin'ny sisin'ny lakroa, misy takelaka telo.Ny sosona sy ambanin'ny tany no vita amin'ny hena voajanahary.Ny sosona afovoany dia vita miaraka amin'ny biraon'ny HDF misy lakam-baravarana.Ny haavony dia mety hahatratra 11,8 mm. Ny fampisehoana dia mifanaraka amin'ny birao HDF, izay tena mampivoatra ny fitoniana amin'ity gorodona ity. Ny mety ho sosona anatiny sy ivelany avy amin'ny bosoa dia afaka mahomby vokany tsara. Ny valan-drakotra ambonin'io koa dia voaroaka miaraka amin'ny loko avo lenta avo lenta, izay tsy vitan'ny tarehin-tsoliky ny voatavo, fa milalao anjara fiarovana tsara ihany koa. Mandritra izany fotoana izany, ity karazana gorodona ity dia mampiasa haitao teknolojia hidin-trano, izay manome antoka tanteraka ny hamafin'ny fahatokiana sy ny fisolokiana amin'ny famoronana gorodona.
Fa inona ny gorobona vita amin'ny bosoa ary misy karazany maro? Ny atiny mifandraika